थाहा पाउनु भयो, यी दुई वित्तिय संस्थाको लिलामी सकार्ने अन्तिम म्याद आज ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
थाहा पाउनु भयो, यी दुई वित्तिय संस्थाको लिलामी सकार्ने अन्तिम म्याद आज !
काठमाडौं । सेन्चुरी बैंक लि र नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सेयर लिलामी सकार्ने आज अन्तिम म्याद हो ।
सेन्चुरी बैंकको १८ लाख ७० हजार २७४ कित्ता र नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक समूहको ४७ हजार ७६३ कित्ता सेयर लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने बुधबार (पुस २५ गते) अन्तिम दिन हो ।
सेन्चुरीले पुस १८ गतेदेखि संस्थापक समूहको १४ लाख ६१ हजार ९९ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ४ लाख ९ हजार १७५ कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याएको हो ।
लिलामीमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई अधार मानेर बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । नेप्सेमा सेन्चुरीको मंगलबार दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता १७० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ । यसमा न्यूनतम १०० कित्तादेखि १० अंकले भाग जाने संख्यामा अधिकतम सबै कित्ताका लागि बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ ।
बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल, सुन्धारा काठमडौं तथा सेन्चुरी बैंकका विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज, नारायणगढ, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, बिर्तामोड र हेटौंडा शाखामा बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ ।
हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ६ करोड ३४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ । जगेडा कोषमा १ अर्ब ३८ करोड २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सेन्चुरीले २७ करोड ४० लाख २ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको सेन्चुरीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ११७ रुपैयाँ १५ पैसा छ ।
नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पुस १८ गते देखि सर्वसाधारणले समेत आवेदन दिन सक्ने गरी सेयर लिलामीमा ल्याएको हो ।
यसअधि नयाँ नेपालले मंसिर १३ देखि २० गतेसम्म सर्वसाधारण समूहको १७ हजार २६० कित्ता र संस्थापक समूहको ८६ हजार ९३ कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याएको थियो । जसमा सर्वसाधारण समूहको सबै सेयर बिक्री भएपनि संस्थापक समूहको ४७ हजार ७६३ कित्ता सेयरमा आवेदन परेको थिएन ।
लगानीकर्ताले न्यनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर प्रतिपर्धात्मक बोलकबोलमा भाग लिनुपर्नेछ । बिक्री पबन्धक एनएमबि क्यापिटल, नागपोखरी काठमाडौं तथा एनएमबि बैंकको वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बुटवल र धनगढी शाखाबाट लिलामी भर्न सकिनेछ ।
हाल यस लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । बाँकी रहेको सेयर लिलामीमा बिक्री गरिसकेपछि पुँजी ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नयाँ नेपालले २१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ३५ रुपैयाँ ५६ पैसा (वार्षिक) रहेको नयाँ नेपालको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८२ रुपैयाँ २५ पैसा छ ।